Somaliland: Desalegn “Ammaankayagu wuxuu ku xidhan yahay Somaliland, markaa indhaha kama qarsan karno” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Desalegn “Ammaankayagu wuxuu ku xidhan yahay Somaliland, markaa indhaha kama qarsan...
Ra’iisul-wasaaraha Itoobiya Md. Hailemariam Desalegn, ayaa sheegay inuu Somaliland ka dhaxeeyo iskaashi kala duwan oo la xidhiidha dhinacyada nabad-gelyadda iyo ganacsiga. Waxaanu xusay in ammaanka dalkiisu ku xidhan yahay Somaliland oo ay yihiin jaar.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, waxa uu sheegay in kasta oo Somaliland aanay ahayn dal la aqoonsan yahay, haddana ay la macaamilaan maadaama oo sida uu tilmaamay aan la kala saari karinba labada shacab ee Somaliland iyo Itoobiya.
Md. Hailemariam Desalegn, waxa uu sidaasi ku sheegay waraysi dheer oo uu siiyay Suxufiga caanka ah ee Cabdisalaan Ibraahim Hereri oo ka tirsan TV-ga Universal, waxaanu waraysigaasi kula yeeshay dhawaan Magaalada Jig-jiga ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Hoggaamiyaha Itoobiya waxa uu ku dooday in arrinta Somaliland iyo Soomaaliya ay tahay go’aan ka gaadhisteedu mid u taalla shacabka labada dhinac.
Ra’iisul-wasaaraha oo la weydiiyay in siday iskugu wadi karaan inay la macaamilaan Somaliland oo ay iskaashi la leeyihiin iyo Soomaaliya, waxaanu yidhi, “Waxaan marka hore odhan lahaa arrinta Soomaaliya iyo Somaliland inay tahay mid u taalla Soomaalida oo u khaas ah. Waxa si weyn ii dhiirigeliyay markii madaxweynaha imika tallada haya ee Soomaaliya uu bilaabay wada-hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya. Waxaanay ila tahay inay wada-hadalladaasi noqdaan qaar macno leh, si loo xaliyo dhibaatadaasi sida ugu dhakhsaha badan ee suurto-galka ah. Laakiin inta ay arrintaasi dhacayso waa inaanu la macaamilaa Somaliland waayo waxaanu nahay deris aad iskugu dhow. Wax kasta oo Somaliland ka dhacayaanna wayna saameynayaan annaga Itoobiya ahaan.”
Hailemariam Desalegn, waxa uu sheegay in ammaankoodu ku xidhan yahay Somaliland. “Ammaankayagu wuxuu ku xidhan yahay Somaliland. markaa indhaha kama qarsan karno oo ma odhan karno oo ma odhan karno annagu shuqul kuma lihin waxyaabaha ka dhacaya Somaliland. taas ma odhan karno inkasta oo aanay ahayn dawlad la aqoonsan yahay. Laakiin waa inaanu la macaamilaa dawladooda.
Waa inaanu la yeelannaa xidhiidh dhinaca ammaanka ah iyo ganacsiga oo soohdimaha iskaga gudba oo dadkayagu ay wada ganacsadaan. Sababtuna waxa weeye lamaba qaybin karayo labadayada shacab,”ayuu yidhi Ra’iisul-wasaaraha Itoobiya, waxaanu intaas ku daray; “Somaliland iyo Soomaaliya, labadaba wada shaqeyn ayaa naga dhaxaysa oo waxa jira waxyaabo badan oo naga dhaxeeya. Waxa jira dekadda Berbera oo aanu isticmaalaynay tobanaan sannadood. Mana aha ah inaanu joojino isticmaalka marsadda Berbera. Markaa macaamilada naga dhaxaysa annaga iyo Somaliland waxay ku salaysan tahay qaab ku-meel gaadh ah uun.”
Hailemariam Desalegn, oo la weydiiyay sida uu u arko in Somaliland muddo dheer ay doonaysay inay go’do Soomaaliya oo beesha caalamkuna ay qaddiyadooda ku soo riixaan dalalka gobolka oo dalkiisu ku jiro, waddamada mandaqaduna ay arrintooda iskaga isu sii dhaafiyaan Soomaalida. Waxaanu arrintaasi kaga jawaabay, “Waxay ila tahay inaanu rumaysanahay oo aaminsannahay in arrinta aayo ka talintu ay tahay mid u taalla dadka,waana sababtaasi waxa aanu ugu riixayno dadka Soomaalida, waana in dawladaha Soomaalidu ay wada xaalaan oo ay dadka siiyaan xuquuqda ay leeyihiin, waana kuwa ay tahay Somaliland iyo Soomaaliyaba inay go’aan ka gaadhaan mustaqbalkooda. Xataa beesha caalamku kuma soo riixi karaan arrintan dalalka gobolka ee kale, waayo ma aha arrin aanu awood u leenahay inaanu ka tallo-bixinno oo aanu go’aan ka gaadhno.
Go’aan-na uma gaadhi karno ummadda Soomaalida, haddii aanu isku dayno inaanu sidaasi samayno, waxaanu samaynaynaa khalad aad u weyn waayo kama dambaysta annaga ayaa dusha u ridaynayna masuuliyada ay tahay inaanaan qaadin.”
Sidoo kalena waxa Ra’iisul-wasaaraha Itoobiya uu waraysigaasi kaga hadlay colaada u dhaxaysa dalkiisa iyo Ereteria, oo uu sheegay inuu rumaysan yahay in mowduucaas lagu furdaamiyo wada-hadallo ku dhisan ilbaxnimo siyaasadeed, waxase uu carabaabay in dawladda Asmara aanay dheg u dhigin baaqyo nabadeed oo Itoobiya ka soo yeedhay. Waxa kaloo uu w kaga hadlay isticmaalka wabiga niilka iyo xidhiidhka ka dhaxeeya Itoobiya iyo Masar iyo qodobbo kale oo caalamka iyo mandaqadaba ku saabsan.